China gwakọtara Silica maka ndị na-emepụta ihe na eletrọnịkị. | Dinglong
Ngwakọta silica anyị nwere nwere nnukwu nrụgide eletriki, mmụba volumetric dị ala na nrụpụta ọkụ ọkụ dị ala. A na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ eletriki dị ka ihe nzacha na ogige epoxy maka ndị na-eduzi ọkara.
nrụgide eletriki dị elu, mmụba volumetric dị ala na nrụpụta ọkụ dị ala
Ihe magburu onwe ya mkpuchi mkpuchi eletrik
Anyị na-ejikọ silica nwere nnukwu eletrik na-eguzogide ọgwụ na obere nkwonkwo ọkụ, ya mere a na-eji ya na ụlọ ọrụ eletrọniki ka ọ na-ejupụta na epoxy ịkpụzi ogige maka ndị na-eduzi ọkara.
Dinglong na-emepụta ọtụtụ ụdị silica ngwaahịa na ngwaahịa akara ule ka o wee nwee ike mezuo ihe niile ụlọ ọrụ eletrọniki chọrọ. Anyị na-enye akwa dị ọcha gwakọtara silica ntụ ọka agwakọta maka ọtụtụ dịanyā ngwa. Usoro mgbanyụ ọkụ nke usoro mgbanwe anyị na-enyere aka igbochi ngwaahịa silica na-emerụ emerụ site na ihe ndị na-abụghị silica na crystalline-silica phase, nke na-ebute ngwaahịa silica amorphous fused nke dị na 99.98% ịdị ọcha kemịkal.
Dinglong fused silica dị dị iche iche akara ule na a dịgasị iche iche nke ọkọlọtọ urughuru nha na nwekwara ike ahaziri gị nkọwa. Anyị nwere ike gbanwee ngwaahịa silica anyị maka ngwa ngwa a kapịrị ọnụ ma dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụ silica ndị a maka ụlọ ọrụ eletrọniki na ụlọ ọrụ enyere na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Fused Silica Lump
Osote: Silica Fused maka Nkedo itinye ego